भरतपुर वडा नम्बर १९ का मतदाता के भन्छन्?
सञ्जिब बगाले/रोहेज खतिवडा
भरतपुर, साउन १७
सविता तामाङ। भरतपुरका मतदाता
सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा यही २० गते पुन: मतदान हुने भएको छ। माओवादी प्रतिनिधिबाट मतपत्र च्यातिएपछि यहाँ मतगणना रोकिएको थियो। यही सन्दर्भमा हामीले मंगलबार भरतपुर महानगर- १९ का मतदातासँग पुन:मतदान निर्णय र उनीहरुको रोजाइबारे कुराकानी गरेका छौं।
नारायणप्रसाद कोइराला, शारदानगर, बखनपुर
नेकपा माओवादीलाई भोट नदिएर गल्ती गरियो भन्ने धेरै कांग्रेसीहरुलाई परेको छ। पहिला त माओवादीलाई भोट दिन परे हात काट्छौं भनेर कांग्रेसीहरुले नै भन्ने गरेका थिए। माओवादीका वडाध्यक्षले समेत कांग्रेसलाई समर्थन गरेकाले कांग्रेसले यसपटक माओवादीलाई भोट दिनेछन्। म त पहिलेदेखि नै माओवादी हो।
तिलबहादुर भुजेल, नयाँबजार
भोट कांग्रेसलाई हाल्न पर्छ। पहिलेदेखि कांग्रेस हो। मेयरमा पनि कांग्रेसले जे भन्छ त्यही मान्ने हो। अन्त भोट हालिन्न।
लक्ष्मी तामाङ (चौधरी), शारदानगर, बखनपुर
रेणु दाहाललाई जिताउन मतपत्र च्यातिएको हो। यसबाट यहाँका जनताले अपमानित महशुस गरेका छन्। म त एमालेलाई नै भोट दिने हो। हामी भाग्यमानी रहेछौं, दोहोर्याएर भोट हाल्न पाइने भयो। भोट माग्न कोही आएका छैनन्। माग्न नआए पनि म त एमालेलाई नै हाल्छु।
दिलमाया मगर, शारदानगर
यो घाममा भोट हाल्न कसरी जाने भन्ने नै चिन्ता छ। भोट हाल्न गएँ भने छवटै भोट कांग्रेसमा हाल्ने हो। अरू केही सोचेकै छैन।
सावित्रा थापा मगर, बखनपुर
मलाई पार्टीको मतलब छैन। मेरो घरपरिवार कांग्रेस हुन्। परिवारका अरूले कांग्रेसलाई नै भोट हाल्छन् होला। मैले कुन पार्टीलाई भोट हाल्छु भन्ने निश्चित छैन।
हरिमाया थापा, नयाँबजार
यतातिर धेरै कांग्रेस नै छन्। भोट त बाँडिन्छ होला। पार्टीले नै भोट बाँडेर हाल्नु भन्या छ। दोहोर्याएर भोट हाल्न जान त मन छैन तर हाल्नै पर्छ। भोट माग्न पनि कोही आएका छैनन्। परिवारमा छ भोट छन्। सबै कांग्रेस र मेयर माओवादी नै हो।
गोपाल तामाङ, गुञ्जनगर
अब कांग्रेस र माओवादी मिलेका छन्। माओवादीले वडाध्यक्ष र सदस्यमा सबै कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने भनेको छ। उपमेयरमा पार्वती साहलाई भोट पनि हालेका छन्। मैले त अघिल्लोपटक पनि रेणुलाई नै भोट हालेको हो। श्रीमती र छोरीले एमालेलाई दिएछन्। यसपटक चाहिँ रेणुलाई नै दिने भनेका छन्।
मीनकुमारी थापा क्षेत्री, शारदानगर
हामी कांग्रेस हौं। एमालेलाई त कुनै हालतमा भोट हालिन्न। माओवादीलाई खै के गरिन्छ, हेरौं। यो घाममा भोट हाल्न के पो जानु भन्ने पनि लागिराखेको छ। उपमेयर पार्वती शाह त मेरो क्लासमेट नै हो। नेविसंघको राजनीति गरेको हो, अहिले स्वास्थ्यका कारण सक्रिय छैन।
मीना आले, गुञ्जनगर
भोट दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने लागिराको छ। तर, दिन त दिनै पर्यो। भोट दिएर पाउने पनि केही होइन। गाउँ विकास हुन्छ भन्ने आशले भोट दिने हो। यसपटक रेणुलाई हाल्ने भनेका छन्। तर, आमा समूहले के निर्णय गर्छ त्यसैमा भर पर्छ।
खेमराज तामाङ, शारदानगर टाउन
पहिले जेमा हालेको यसपालि पनि त्यसैमा हाल्नुपर्छ। मतपत्र त माओवादीले नै च्यातेको हो। जसले गरे पनि घटना भइसक्यो। हामी कांग्रेसलाई भोट दिन्छौं। मेयरलाई के गर्ने भन्ने सोच्न बाँकी छ।
शम्भु नेपाली, शारदानगर टाउन
अहिले कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन छ। त्यसैले रेणुलाई भोट दिनुपर्छ। पहिला कांग्रेसका मान्छेले माओवादीलाई भोट कसरी हाल्ने भनेका थिए। अब त सबैले रेणुलाई नै हाल्ने भनेका छन्। धेरैले रेणुलाई चिनेका पनि थिएनन्, प्रचण्डकी छोरी भन्ने मात्रै थियो। अहिले त उनी यो ठाउँमा धेरैचोटि आएकी छन्। यसपालि रेणुलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छ।
लक्ष्मी तामाङ, प्रगति टोल
रेणु दाहालको सोचेजति भोट आएन, त्यसैले च्यातेको हो। यहाँ गुम्बा बनाउनुपर्ने छ। जसले गुम्बा बनाउन सहयोग गर्छ उसैलाई भोट हाल्ने भन्ने कुरा भएको छ। पहिला रेणु दाहाललाई यहाँ कसैले चिनेको थिएन, अहिले त सयपटक आइसकिन् होला। गुम्बाको छेउमा भएको दस धुर जग्गा गुम्बाका लागि किन्नुपर्ने छ। त्यसमा कसले सहयोग गर्छ उसैलाई दिने हो। गुठीले निर्णय गर्छ होला नि।
जयराम लामा, गुञ्जनगर
पहिले चुनाव गर्दा माओवादीलाई समर्थन गरेको हो। रेणुले पैसा खर्च गर्छ भन्नेहरू पनि छ। गठबन्धनलाई भोट दिन पर्ने, मान्नै पर्ने कन्डिसन थियो। तर अलिक आक्रोश पनि थियो कांग्रेसका मतदातामा। कतिपयले कुरा बुझेको थिएन। मतपत्र च्यात्नेलाई त कारबाही गर्न पर्छ। यो राम्रो होइन, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन तर मतपत्र च्यातेकै कारण भोट अर्को ठाउँ हाल्ने कुरा भएन। भोट त आफूले सधैं जहाँ हाल्ने हो त्यहीँ हाल्नुपर्छ।
अहिले भरतपुरमा सबैको ध्यान १९ नम्बरमा छ। उम्मेद्वारको पनि ध्यान यहीँ छ। यसको फाइदा पनि छ। हामीलाई चाहिने विकास हो। उम्मेद्वारले थुप्रै आश्वासन बाँडेको छ। त्यो पूरा गर्न लगाउनुपर्छ। जसले जिते पनि अब १९ नम्बरलाई विकासमा सजिलो छ। अहिले पनि हाम्रा केही साथीहरू माओवादीलाई त के भोट दिनु भन्ने छन्। उनीहरूलाई कुरा बुझाउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ।
मोहन गुरूङ, शारदानगर
हुन त म कांग्रेसको मान्छे हो। तर पार्टी मात्रै हेरेर भएन, विकास कसले गर्छ भन्ने हेनुपर्यो। भरतपुरको विकास गर्ने हो भने रेणुलाई जिताउनु पर्छ भन्ने छ। मेयर एमालेको अनि तल सबै कांग्रेसको भएर कांग्रेसले कसरी विकास गर्छ? पहिले त रेणुलाई दिएको थिइनँ तर अबचाहिँ दिने हो।
काशीराज गुरूङ, रामपुर
मतपत्र च्यातेर बदमासी गर्यो नि। अर्काले हालेको भोट च्यात्नु हुन्छ? यो त बदमासी हो। मेयरमा अस्ति प्रचण्डकी छोरीलाई दिएको थियो। अहिले पनि उसैलाई दिनुपर्छ भनिरहेको छ सबैले।
सविता तामाङ, रामपुर
त्यत्रो घाममा बसेर भोट हालेको दु:ख लाग्यो। हाम्रो अपमान भएको छ। फेरि पनि घाममा बसेर भोट हाल्नुपर्छ। म त सातै छाप एमालेमा हाल्ने हो। मतपत्र च्यात्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अलि वर्ष उनीहरूलाई जेल पनि हाल्नुपर्छ।
हर्क पाख्रिन, रामपुर
बेमौसमको बाजा जस्तो चुनाव आयो। बल्लबल्ल पानी आको छ, रोपाईं गर्नु कि भोट हाल्न जानु! अब रेणु दाहाललाई जिताउनै पर्ने भन्ने छ। सम्भावना पनि छ, देवीको पनि सम्भावना त छ। कांग्रेसले गद्धारी गरेनन् भने रेणुलाई जिताउँछ अब। मत च्यातिएकै रेणुले नजितेर हो। अब रेणु नै नभइ नहुने भएको छ। प्रचण्डको भएकाले पनि चितवनको विकास हुन्छ, उसलाई दिन पर्छ। मलाई अहिले भोटको निर्णय गर्न फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भयो। भाइ वडाध्यक्ष उठेको छ एमालेबाट। आफ्नो पार्टी कांग्रेस पर्यो। रेणुलाई सहयोग गर्नु छ। गाह्रो भइरहेको छ नि।
धावा छिरिङ तामाङ, रामपुर
अब रेणुको भोट बढ्ने त पैसाको चलखेल भयो भने मात्रै हो। नभए कसरी बढ्छ त? देवीले पहिलेको भोट संरक्षण गर्न सक्यो भने सजिलै जित्छ। यसमा गाह्रो पनि छैन। म पहिलेको माओवादी हो तर २०५४ सालमा एमालेबाट वडाध्यक्ष उठेको थिएँ। केही समय पार्टीमा काम गरेँ। अहिले सक्रिय छैन। तर एमालेलाई भोट दिन्छु।
कुलबहादुर पाख्रिन, रामपुर
मतपत्र च्यातेर एकदमै नराम्रो भयो। अब रोपाईमा जानु कि भोट हालेन जानु भन्ने भो। दु:ख दियो नि! प्रचण्ड आफैं उठ्यो भने चाहिँ एक भोट दिन्छौं। माओवादीको प्रचण्ड भनेको नेपाल सरकार चलाउने मान्छे हो। ऊ इमान्दार हुन्थ्यो भने यहाँ उठ्दा जुनसुकै चुनावमा पनि हामी एकभोट दिन्थ्यौं। छोरीलाई त त्यस्तै हो। अस्ति देवी ज्ञवालीलाई दिएको हो। अब पनि विचार गर्दै छौं। यहाँ छोराको रोजगारको कुरा पनि छ।
आशबहादुर तामाङ, गुञ्जनगर
रेणुलाई भोट अस्ति पनि जनताले दिएकै हो। अब अझै बढ्छ। हामी लमजुङबाट यहाँ झरेको हो। लमजुङ हुँदा म एमाले थिएँ। यहाँ त त्यस्तो छैन। गाउँको माहोलमा माओवादी भएँ। सबैले रेणुलाई, कांग्रेसलाई दिनुपर्छ भनेका छन्।
राजकुमार सुनाम, शारदानगर
रेणु दाहाललाई हाल्ने भनेका छन् सबैले। अस्ति पनि कांग्रेसलाई हालेको हो। पहिले आवेशले तालमेल भए पनि कांग्रेसका मान्छेले दिएनन्। अब त त्यस्तो छैन। कांग्रेसले मान्छे फकाइसक्यो। अब रेणुले जित्छ होला।
लोकबहादुर तामाङ, रामपुर
हामी त १९ नम्बरको मान्छे पर्यौं, कुरै नगरौं। पार्टीको कुरा भएन, जसले गाउँ बनाउँछ त्यसैलाई दिनुपर्छ नि। म खासमा कांग्रेसलाई भोट दिने मान्छे हो। सुशील कोइरालालाई हामीले नै भोट दिएर जिताको त हो नि। अहिले वडामा एमालेबाट भाइ उठेको छ- प्रकाश। उसलाई दिने हो। मेयरमा अस्ति पनि देवीलाई दिएको हो। अब पनि उसैलाई दिने नि।
प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, साउन १७, २०७४ १०:४७:४७